लोहोनी : भन्नू हुन्छ“ओलीले भ्र,ष्टाचार गर्दिन-गर्न दिन्न भन्नु र पागलले म पागल होइन भन्नु एकै हो, ओली बढारिन्छन्” …हेर्नुहोस!
काठमाडौँ – राप्रपा संयुक्तका अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै ने,तृत्वमा पाँच वर्ष सरकार संचालन हुनेमा शं,का व्यक्त गरेका छन्।
एक-कुराकानीका क्रममा लोहनीले सनककै का,रण प्रधानमन्त्रीको बहिरगमन हुन सक्ने स,म्भावना रहेको बताएका हुन्। वरिपरि बसेर भा,गबन्डा खानेले स,मर्थन गरेकै आ,धारमा सन्किँदै गएको ख,ण्डमा प्रधानमन्त्री ओलीको ब,हिरगमन हुने उनले दा,वी गरे।
Nepalese Prime Minister Khadga Prasad Oli arrives for the inaugural ceremony of the India-Nepal business forum in New Delhi, India, on Friday, April 6, 2018. Photo: AP
प्रधानमन्त्रीले ‘म कसैलाई भ्र,ष्टाचार गर्न दिन्न आफू पनि गर्दिैन’ भन्दै आएता पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिको दा,वी गरे। पागल मान्छेले आफूलाई पा,गल होइन, ठीक छु भन्नु र ‘म कसैलाई भ्र,ष्टाचार गर्न दिन्न आफू पनि गर्दिैन’ एकै रहेको उनको जि,किर छ। ओलीले आफ्नो पा,खण्डपनलाई नचिनेको उनको आ,रोप छ।
पा,खण्डीपन बढेर गएकै कारण ने,तृत्व स,ङ्कटमा आउने पनि लोहनीको तर्क छ। पा,खण्डीपन कुनै पनि ने,तृत्व स्थायी नहुने उनले दा,वी गरे। विगतमा नेपाली कांग्रेसका श,क्तिशालि भएका गिरिजाबाबु बढारिएर गएजस्तै ओलीको पनि उस्तै उनले लोहनीले जि,किर गरे।
“सं,कट भनेकै जब ने,तृत्वमा पा,खण्डीपन बढेर जान्छ, त्यसपछि सं,कट आउने त हो नि । सं,कट आउने अवस्था आयो भने तपाईंहरुले यस्तो आएको छ भनेर बाटो देखाउने हो । त्यहाँ देखेको कुरा भन्दिने हो । हिजो गिरिजाबाबु पनि २०४८ सालमा श,क्तिशाली भएर आउनुभएको थियो । पछि बढारिएर जानुभयो ।”,उनले भने।